Chelsea oo Janaayo 70 milyan ku dooneysa Cavani iyo Hamsik. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo Janaayo 70 milyan ku dooneysa Cavani iyo Hamsik.
Chelsea oo Janaayo 70 milyan ku dooneysa Cavani iyo Hamsik.
Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa mar kale Napoli ka doonaya labada ciyaaryahan oo ay ku duusho Edinson Cavani iyo Marek Hamsik kuwaas oo ay ka go’an tahay inuu keeno Stamford Bridge, sida uu qoray wargeyska Cough offside.
Kooxda ka dhisan galbeedka London ayaa diyaar u ah inay dalab u dirto weeraryahanka heerka caalami ee dalka Uruguay Edinson Cavani iyo kubad sameeye Marek Hamsik iyadoo ay Blues dooneyso inay dib u dhis isku sameyso maadaama ay xaalad xun ku jirtay lixdii isbuuc ee lasoo dhaafay.
Waxaana ay xilka ka qaaday tababareheedii Roberto Di Matteo iyadoo u magacaawday Rafa Benitez kaasoo aan guul gaarin sedaxdiisii kulan ee ugu horeysay.
Agaasimaha farsamada Michael Emanelo iyo Benitez ayaa ka dooday macquul ahaanshiyaha Janaayo diirada lagu saarayo labadaan ciyaaryahan, Abramovich ayaana horaan dalab ugu diray, laakiin waxaa la ogyahay inay taasi ka biyo diiday kooxda San Paolo oo aan dooneynin inay iibiso labada xidig ee halbowlaha u ah.
Abramovich ayaa arka in kooxdiisa Toban dhibcood looga hugaaminayo Premier League halka ay Champions League talaabo u jirto inay ka harto, waxaana lasoo sheegayaa inuu mar kale ka gocanaayo go’aankii uu ku ceyriyey Di Matteo.
Sidaas darteed wuxuu isha ku hayaa inuu tageerayaasha kooxda heshiisyo sare ku qanciyo bisha Janaayo marka uu suuqu furmo, iyadoo markaan lasoo sheegayo in seefta maalqabeenka reer Ruush ay saaran tahay ninka reer Spian Fernando Torres.
Edinson Cavani oo muddo dheer lala xiriirinaayey Chelsea ayey bedelkiisa u raadsanayaan oo diirada u saaran, iyadoo uu xiisahaani bilowday labo sano ka hor, 26-jirkaan ayaa 83 gool Napoli u dhaliyey 112 kulan.
Chelsea ayaana rabta inay xidigaan lasoo iibsato Injineerka quudiya Hamsik iyadoo labadooda ku dooneysa 70 milyan oo ginni una dhiganta 86 milyan oo euro, milkiilaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaana laga warqabaa inuusan lacagtaan indhaha ka daboolan doonin.